Ciidamada xoogga dalka oo Shabaab ka soo badbaadiyay xoolo ay dhaceen | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Ciidamada xoogga dalka oo Shabaab ka soo badbaadiyay xoolo ay dhaceen
Ciidamada xoogga dalka oo Shabaab ka soo badbaadiyay xoolo ay dhaceen
Ciidamada Xoogga dalka ayaa howlgallo lagu soo badbaadiyay xoolo ay dhaceen maleeshiyadka Al-shabaab ka sameeyay qaybo ka mid ah gobolka Galgaduud.
Jeneraal Axmed Maxamed Tareedishe Taliyaha Guutada 52aad ee ciidanka Xoogga dalka Soomaaliyeed oo la hadlay Radio Muqdisho ayaa sheegay in howlgalka lagu soo badbaadiyay in ka badan 100 neef oo Ari ah, waxaana uu xusay in dadka deegaanka ay kolkii hore Shabaabka ka dileen labo ka tirsan kooxda Al-Shabaab.
“Howlgalka waxaan ka sameynay deegaanka Bood oo aan ka soo dhicinay xoolo ay dadka deegaanka ka dhaceen, sidoo kale ciidamada waxa ay la wareegeen deegaanka Wabxo oo ka mid ah meelaha ay Al-Shabaab dadka ku dhibaateeyaan” ayuu yiri Jeneraal Axmed.
Taliyaha Guutada 52aad ee ciidanka Xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa sheegay in maleeshiyaadka ay dileen hal qof oo ka mid ah dadka reer miyiga ah oo ay ka dhaceen xoolaha, waxaana uu intaa ku daray in ay la baxsadeen 100 kale oo neef oo Ari ah, kuwaasi oo iminka ku daba joogaan.
Previous articleQaban qaabada xafladda caleemo saarka Madaxweynaha Galmudug oo cadaado ka socoto
Next articleMashruuc lagu afurinayo dadka danyarta ah oo laga hirgeliyay Baydhabo